Pauk Phaw, PaukPhaw, Myanmar, Chinese, Cultures, Friendship - Pauk Phaw - PaukPhaw Myanmar
2021-09-17 မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း (Myanmar Rice) နှင့် ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင် (ဝါးတန်း) တို့ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စားသုံးသူ ပြည်သူများအတွက် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဆန်ရောင်းချမှု အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဝါးတန်းလမ်းရှိ ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်၌ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
2021-09-16 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတဆင့် နိုင်ငံတကာသို့ ပဲမျိုးစုံ တင်ပို့မှာ ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၄၀ ကျော် မိုပိုရရှိထားကြောင်းသိရသည်။
2021-09-16 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခုနှစ် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာသီ၌ မိုးစပါးဧက ၁၇၉၈၀၀၃ ဧက စိုက်ပျိုးပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရသည်။
2021-09-16 စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ အထိ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၄,၉၉၀,၇၅၈) ဦးအား ထိုးနှံပေးပြီးဖြစ်ရာ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့် ထိုးနှံပြီးစီးသူ (၃,၃၆၅,၉၁၅) ဦး နှင့် ပထမအကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသူ (၁,၆၂၄,၈၄၃) ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
စက်တင်ဘာ၁၅ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ ၂၄၂၄ ဦးရှိ
2021-09-16 စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၂၄၃၆၄ ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၂၄၂၄ ဦးတွေ့ရှိရပြီး ပိုးတွေ့နှုန်း ၉.၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
2021-09-14 လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတင်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခါသမယတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ (၅)နိုင်ငံမှ အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့ပူးပေါင်းကာ “၂၀၂၁ ခုနှစ် လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နိုင်ငံတကာပိုစတာဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ” ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
2021-09-12 ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲမှ တရုတ်-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နန်နင်းမြို့၌ ကျင်းပကြောင်း CRI မှ သိရသည်။
2021-09-04 တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းပေးအပ်သော တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများကို မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် ရွှေလီနယ်စပ်ဂိတ်မှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်သံရုံးမှ အောက်ဆီဂျင်စက် အလုံး ၅၀၀ လှူဒါန်း
2021-09-02 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းသော တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂.၅ သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အောက်ဆီဂျင်စက် (Oxygen Concentrator) အလုံး ၅၀၀ သည် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးသို့ ပို့ဆောင်ရောက်ရှိပြီး မြန်မာဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်သံရုံးမှ အောက်ဆီဂျင်စက် ၁၄၀လုံးလှူဒါန်း
2021-08-25 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးမှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အောက်ဆီဂျင်စက် (Oxygen concentrator) ၁၄၀ လုံးကို သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းပေးအပ်ကြောင်း သိရသည်။
2016-09-10 တရုတ္လ 8 လ 15 ရက္ေန႔ တရုတ္ရုိးရာ ပြဲေတာ္ လမုန္႔ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
မေနာ ရဲ႕ ခ် စ္ တ ယ္ သီခ်င္း နားဆင္ပါဦး
2015-02-28 စကားေျပာရင္ ေအးေဆးျပီး တည္ျငိမ္ေနတာေလးရဲ႕................
HUAWEI P8 အသစ္ မိတ္ဆက္
2015-04-06 HUAWEI P8 ဖုန္းအသစ္ ၏ ဖိတ္ေခၚစာ HUAWEI သည္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားအား modern အသစ္ျဖစ္ေသာ P8 ၏ ဖိတ္ေခၚစာမ်ား ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။ဖိတ္ေခၚစာတြင္ HUAWEI သည္ အဂၤလန္နိဳင္ငံ လန္ဒန္ျမ...
2015-08-15 ခ်စ္ခင္ရတဲ့ ထ်န္က်င္းက သူငယ္ခ်င္းေရ မီဒီယာမွ တဆင့္ ၾကားသိရပါတယ္၊ မေန႔က ထ်န္က်င္းၿမိဳ႔မွာ ျပင္းထန္တဲ့ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကဒါဏ္ရာရၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို ၀မ္းနဲစြာ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း၊ အခုဒို႔ႏိုင္ငံမွာလဲျပင္းထန္တဲ့ ေရေဘးဒါဏ္ကို အလူးအလဲခံေန ရတယ္ကြာ သူငယ္ခ်င္း၊
ဒီတစ္ခါလည္း ရႈံးျပန္ေပါ့ ဂ်ပန္
2015-09-11 စက္တင္ဘာလ၃ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ေပက်င္းၿမိဳ႔မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တို႔အေပၚေအာင္ပြဲခံျခင္း ႏွစ္၇၀ျပည့္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကို ကမာၻတစ္၀ွန္းမွ လူထုႀကီးက ၾကည့္ရႈၿပီး ခ်ီးမြမ္းမဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
နာဂဒေသခရီးစဥ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
2020-12-22 နာဂဒေသခရီးစဥ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကို နိုဝင်ဘာလ(၁၇ )ရက်နေ့က စတင်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးကေဆိုင်းထံမှသိရသည်။
2020-12-08 ရှမ်းပြည်နယ် နောင်ချိုမြို့နယ် ကံကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကုန်းကျေးရွာမှ နောင်ချို-မန္တလေးကုန်စိမ်းကား ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးမှာ COVID-19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသဖြင့် နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော တိမ်ပင်လယ်စခန်းများ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှစတင်၍ ခေတ္တပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ခရီးသွားအတွက် COVID-19 ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်
2020-02-20 ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ပြန့်နှံ့ကူးစက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ထိ ထုတ်ပြန်ချက် ၄ ခု ထုတ်ပြန်ထားရာ ထုတ်ပြန်ချက်များကို အောက်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ချက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် နန်းတော်ဂိတ်မှ ဝင်နိုင်
2020-01-01 တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်သော မူဆယ်မြို့ နှစ်နိုင်ငံ လူဝင်လူထွက် စစ်ဆေးရေး နန်းတော်ဂိတ်မှ တရုတ်နိုင်ငံမှ သံတမန်နှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း ပတ်စပို့ကိုင်ဆောင်သူများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ရက် ၃၀ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြုလိုက်ရာ အဆိုပါနေ့ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်မှစတင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသားများ ပတ်စပို့ဖြင့် စတင်ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။
2019-12-28 အာနန္ဒာဘုရားကြီး၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓကို ပူဇော်သည့်ပြင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ၁၂ ပွဲ စျေးသည်များ၏ စျေးပွဲတော်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
2017-04-11 နတ္ျပည္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ က လက္ဆယ္ေခ်ာင္းမျပည့္ပါဘူး…. ငရဲမင္းၾကီး ဆီမွာေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြဟာ ေမဂ်ာအစံု ေက်ာင္းအစံုက အင္ဂ်င္နီယာေတြ Ph.d, M.E, M.Arch B.E, B.Arch, B.Tech, AGTI စံုလင္စြာရွိပါတယ္… ဒါေၾကာင့္မို႕ ငရဲမင္းၾကီး ရဲ႕လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈဟာ အရမ္းျမန္ျပီးေတာ့ တစ္လမ္းလံုးကို သူတစ္ေယာက္တည္း ေဖာက္လုပ္ျပီးစီးသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လူ႕ျပည္ဆင္းျပီး နတ္ျပည္ Promotion အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားေတြကို ေဆးလိပ္မေသာက္ဖို႕.အရက္မေသာက္ဖို႕.ဖဲမရိုက္ဖို႕… မေကာင္းတာေတြ မလုပ္ဖို႕…. ေတြ ေျပာဆို စည္းရံုးျပီးေတာ့ နတ္ျပည္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ အေရအတြက္တိုးေအာင္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္…. ကၽြန္ေတာ့္ကိုခြင့္လႊတ္ပါ” ဟု ေျပာကာ မ်က္ႏွာငယ္ေလးျဖင့္ ထြက္သြားေလသည္…..။
2016-11-30 ခ်စ္ဆံုးတို႔ေရ…. ရာသီေအးလာၿပီ၊ က်န္းမာေအာင္ေနေနာ္…… ရာသီေအးလာၿပီ မနက္ကိုပ်င္းၿပီး ေကြးမေနနဲ႔ မနက္စာလည္း သတိတရနဲ႔ စားအုန္း ႏြားႏို႔ပူပူေလးေသာက္၊ ဗိုက္လည္း ျပည့္ေအာင္စား မဟုတ္ရင္ ဗိုက္စာၿပီး ခ်မ္...
2016-11-04 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ခ်ိဳျဖဴျဖဴျမင့္ ၿဗိတိန္- အေမရိကန္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အႏုပညာရွင္တုိ႔ ပူးေပါင္း ပံုေဖာ္ထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံ ဇာတ္ကား တစ္ကားျဖစ္သည္။ ဇာတ္ကားသည္ ထူးျခားဆန္းၾက...
2016-10-13 မင္းသမီး Emma Watson ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ Beauty and The Beast Written by- Nay Min Lay ဒစ္စေနး၏ေနာက္ဆုံးရိုက္ကူးထားေသာ “Beauty and The Beast” ဇာတ္ကားအား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း၌...
2016-10-06 ကမာၻတ၀န္း ေရပန္းစားေနေသာ PPAP သီခ်င္း Written by – Nay Min Lay PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) ၄င္းသီခ်င္းဗီဒီယိုမွာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားကို အလြန္မင္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္တြင္လ...
ကိုဗစ် စတုတ္ထလှိုင်းအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ(၂)
2021-09-06 ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အောက်ဆီဂျင်အလှူကြီးပေးနေသည့် ခင်နှင်း-ပညာဒါနဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူ စာရေးဆရာ ခင်မောင်နှင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း)အားကွန်ရက်ပေါက်ဖော် သတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ် စတုတ္ထလှိုင်းအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ(၁)
စပ်မျိုးစပါးပညာရှင် ယွမ်လုံပင်း (၂)
2021-06-05 ကမ္ဘာ့စာနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (Food Agriculture Organizaion – FAO)ရဲ့ ၁၉၉၁ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ကမ္ဘာ့ဆန်ထွက်ရှိမှုရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးတဲ့ ကမ္ဘာ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးမှု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းက ရရှိနေတာလို့ဆိုတယ်။ မစ္စတာယွမ်ဟာ သူရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အခြားနိုင်ငံတွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့သူ့အဖွဲ့ဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုတေသနဌာန (International Rice Research Institute - IRRI) ကို အရေးပါတဲ့ စပ်မျိုးစပါးမျိုးစေ့တွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်။
2021-06-05 "အမျိုးသားခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ စံပြဇုန် Ningxiang ခရိုင်ပါတီကော်မတီနှင့် ခရိုင်အစိုးရသည် Meishan ကို ဗဟိုပြု၍ Jinzhou မြို့နယ်၊ Shuangjiangkou မြို့နယ်၊ Xiaduopu မြို့နယ် စုစုပေါင်း ၂၁၆ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသော အမျိုးသားခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစံပြဇုန်တွင် တည်ဆောက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စုသင်္ကြန်ပွဲ (၂)
2021-04-11 မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အတာသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်သည်ကား ရေကစားခြင်းသက်သက်ဖြင့် ဆင်နွှဲသော ပွဲတော်မဟုတ်ပေ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်ပါးသူတို့အသက်ကိုလွှတ်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းဆေးကြောခြင်း စသည်ဖြင့်လည်း ကုသိုလ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့် အမှုများကို လုပ်ဆောင်ကြလေသည်။
Pauk Phaw：All for the brotherhood of the peoples of Myanmar and China, understanding, exchange, cooperation and .....
Pauk Phaw on Wechat
© 2015-2021 Pauk Phaw